Waxay kaa caawinaysaa inaad si dhakhso ah u fahamto mabda'a iftiiminaya iftiinka qoraxda iyo faa'iidooyinka tamarta qoraxda - Sresky
Waxay kaa caawinaysaa inaad si dhakhso ah u fahamto mabda'a iftiimiya iftiinka qoraxda iyo faa'iidooyinka koronto-dhaliyaha qorraxda
Mabda'a iftiimiya iftiinka qoraxda
Qalabka qoraxda ayaa ah qaybta udub-dhexaadka ah iyo qaybta ugu muhiimsan ee nidaamka soosaarka tamarta qoraxda
Waxa jira laba hab oo tamarta cadceedda loo dhaliyo. Mid waa habka loo beddelo iftiinka oo loo beddelo kuleyl ka dibna loo beddelo koronto, midda kalena waa habka tooska ah ee iftiinka iftiinka loogu beddelo.
Iftiinka qorraxdu waa in tamarta qoraxda loo beddelo tamar koronto iyada oo loo marayo muraayadaha qorraxda. Oo ku wareeji batteriga iyada oo loo marayo kontoroolka qorraxda ee caqliga leh. Marka habeenku dhaco ee loo baahan yahay in la shido, awoodda batteriga ku jirta waxay soo saartaa LED iyada oo loo sii marayo kontaroolaha caqliga leh (wareegga isbarbardhigga) si ay uga dhigto iftiin muuqda.
Faa'iidooyinka tamarta qoraxda. Korontada qorraxda waxay leedahay faa'iidooyin badan oo gaar ah:
Ilaha tamarta qoraxda waa badbaado oo la isku halayn karo, leh sahay deggan. Oo ma saameyn doonto dhibaatada tamarta iyo suuqa shidaalka oo aan degganayn.
Ilaha iftiinka qoraxda ayaa loo isticmaali karaa meel kasta, gaar ahaan meelaha fog fog ee korontadu ka jirto. Kaas oo yarayn kara dhismaha xadhkaha laydhka ee fogfog iyo luminta xadhkaha isgaadhsiinta.
Jiilka tamarta qoraxda uma baahna shidaal, taas oo si weyn u yaraynaysa kharashka hawlgalka;
Tamarta qorraxda waa tamar nadiif ah oo aad ugu habboon. Korontadu ma soo saarto walxo waxyeello leh, waana mid deegaan ahaan u wanaagsan.
Faa'iidooyinka laysarka qorraxda ee uu isticmaalo Sresky:
Tayada muraayadda qoraxda waxay la xiriirtaa tayada dhammaan nalka qorraxda. Iyo waxtarkeeda beddelaad sidoo kale waa mid aad muhiim u ah.
Qalabka unugyada cadceedda ee fasalka A ee ay adeegsato Sresky waxay leedahay adeeg nolol dheer iyo hufnaan beddelaad sare leh.
Unugga fasalka A:
Looxyada fasalka A waxaa lagu isticmaalaa saldhigyada waaweyn ee korontada. Unugyada la isticmaalo waa xaashida heerka A. Tilmaamaha filimka noocan oo kale ah waa muuqaal nadiif ah oo labbisan. Daabacaadda saxda ah ee xadhkaha korantada, ma jabna shabagyada, wax wasakh ah oo korka ah ma jiraan, wax dareere ah ma laha. Ma jiraan dildilaacyo qarsoon, ma jiraan xagtin, ma jiro xudunta madow, ma jiro isbeddel hadda jira, waxqabadka korantada deggan, iwm., hufnaanta beddelka sare> 21.5%
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabto nalalka waddooyinka cadceedda, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto